Itolini yentsimbi engcolisayo yentsimbi
Ityhubhu engasasebenziyo yentsimbi ityhubhu yefolley F-30 ubukhulu: 290mm (D) * 420mm (H) eyona nto iphambili: 1. Ukwakhiwa kwesinyithi ngentsimbi yentsimbi ngetubhu yeplastiki ngaphezulu; 2. isiseko esine-di.100mm swivel castors 3. Ityhubhu yeplasitiki inokutshintshwa ibe yintsimbi engenasici kwisicelo esikhethekileyo. Nceda ukhumbule ukunxibelelana nathi ngamaxabiso ngenxa yolu tshintsho.
Intonga ye-IV engenasici ye-M-4
intonga ye-IV engagqwali yento engu-M-4 ophambili: 1. Intsimbi ye-telescopic ithubhu 2. ephezulu ene-4 chops hoops
Ukuma kwe-IV (uhlobo C)
Ukuma kwe-IV (uhlobo C) eyona nto iphambili: 1. Ityhubhu yentsimbi engajikeleziyo kunye nesiseko seplastiki se-ABS; 2. Ukuphakama kunokuhlengahlengiswa ukusuka kwi-135cm ukuya kwi-240cm; 3.Phezulu ngamagwegwe angama-4 e-chrome, isiseko seplastikhi seABS sinama-castors
Sihlalo esihamba kunye F-44-2
Ubungakanani: I-L1900 * W530 * H240 / 400mm eyona nto iphambili: 1. Isakhelo sesinyithi e-epoxy, isiponji somgangatho ophezulu ngesigqubuthelo sesikhumba sokufakelwa 2. isiseko kunye ne-castors 3. le mveliso inokusetyenziswa njengesihlalo kunye nebhedi.
Intsimbi yeenyawo engathathi ntambo iphantsi inyawo F-36-1
Ubungakanani: L590 * W410 * H200 / 400mm 1. Isakhelo sensimbi engenasici, isigqubuthelo nge-ABS irabha 2. unyawo nge-anti-ingxolo yerhasi
I-mattress edibeneyo ye-F-36-3
IStool F-36-3 isentloko ephambili: 1. ukuphakama okuguqukayo ngumthombo werhasi ukusuka kwi-480-620mm 2. Isiseko se-chromed, amasebe ama-5 anama-casters; 3. isihlalo si-Dia.320mm kunye nendawo ephezulu yecushion
Iscreen esineentsimbi i-F-35
ubukhulu: I-2400mm (L) * 1680mm (H) eyona nto iphambili: 1. Isakhelo sesinyithi, kunye namakhethini ahlambaweyo 2. Amaphepha amane esigcini esitalini
Uxinzelelo lwebhedi ye-semi-fowler H-2
Ubungakanani: I-L1930mm 2. kunye ne-zipper
Umatrasi ohlanganisiweyo we-H-13
Isikhuselo se-H-13 seMatress: Ingaphantsi yemanzi ye-PU engaphefumliyo kunye nezinto ezinokuphefumla isixhobo seMatress filler: Isiponji esiphakamileyo sokomelela kunye ne-foam yememori.
Ukunyuswa kwesigulana sombane
Izicelo ze-DE-1C1: ○ Ezi mveliso zisebenza kwizigulana ezihlala ixesha elide ezibhedini, kunye nabaguli abanengxaki yokuhamba okanye ukungakwazi ukuhamba emva koqhaqho. Ingasetyenziswa ngoncedo lwabakhathaleli ezibhedlela, kumaziko okugcina abantwana okanye ekhaya. Abanyamekeli banokuthi baphakamise okanye basuse isigulana ngokusebenza okukodwa, kwaye uyilo lokusindisa abasebenzi lunokukuthintela ukulimala komqolo kwizigulana okubangelwa kukungafaneleki komntu ononophele. Amanqaku: ○ Isakhelo esiphambili senziwe nge-tube yentsimbi ephezulu kunye nomgubo ...